Man United oo £35milyan ku dalbatay beddelka Paul Pogba, miyuu ka tegayaa Kooxda? | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA CAALAMKA - Man United oo £35milyan ku dalbatay beddelka Paul Pogba, miyuu ka tegayaa Kooxda?
Man United oo £35milyan ku dalbatay beddelka Paul Pogba, miyuu ka tegayaa Kooxda?
Manchester United ayaa shaacisay in ay dooneyso soo qaadashada laacibka Michael Seri – iyadoo uu weli taaganyahay muranka Mustaqbalka Paul Pogba.
United ayaa laga warqabaa in ay xiriir la sameysay khadka dhexe laacibka uga ciyaara kooxda Nice ee Seri toddobaadkan, waxayna usoo jeediyeen in uu beddelo Pogba oo aan xagaaga dambe joogi doonin Old Trafford keddib 2 sano oo uu kooxda Man Utd la shaqeynayay.
Pogba ayaa laba mar laga saaray safka United iyadoo macallin Jose Mourinho uu beddel ku saaray 2 ka mid ah Afartii kulan ee ugu damneysayna– waxaana la sheegayaa in bandhigga laacibkan uu aad u liito marka la fiiriyo Sanadkii hore.
Xiriirka Mourinho iyo xiddigga Pogba wuu sii xumaanayay tan iyo markaas, waxaana laacibka ugu qaalisan United ee ku fadhiya £89milyan uu kooxda ka dhaqaaqi doono, maaddaama uu waayay Kalsoonida macallinka.
Real Madrid iyo kooxo kale ayaa durba billaabay in ay laacibka si hoose ula sheekeystaan, waana suuragal in ay qaataan, iyadoo United ay dhankeeda u weecatay laacibka Seri ee dalka Ivory Coast, kaasoo noqon doona beddelka laacibka dalka Faransiiska kasoo jeeda.